SONSAF | Dalladda SONSAF oo soo bandhigtay xog ururin ku saabsan arrimaha saaamaynta ku leh doorashooyinka soo socda ee isku sidkan.
Dalladda SONSAF oo soo bandhigtay xog ururin ku saabsan arrimaha saaamaynta ku leh doorashooyinka soo socda ee isku sidkan.
Xog ururintan oo ah mid qabyo ah looguna talo galay in dhinacyada kala duwan ee doorashada ku lugta lihi falanqeeyaan isla markaana wax ku daraan, ayaa waxa diiradda lagu saaray arrimaha ay ka midka yihiin abaaraha dalka ka jira, xanuunak COVID-19 , kaadh qaadashada, wacyi galinta codbixiyaha iyo arrimo kale oo la hal maala.
Waxaan ugu horrayn madasha ka hadlay guddoomiyaha dalladda ururrada bulshada rayidka ah ee SONSAF MUDANE ANWAR C.RAXMAAN WARSAME oo faah faahin ka bixiyay muddadii la soo waday xog ururintan iyo sida ay muhiimka ugu tahay doorashada soo socota iyo dhinacyada kala duwan ee si uun lugta ugu leh doorashada.
Waxa iyaguna madasha ka hadlay masuuliyiin ka socday saddexda xisbi qaran oo soo dhaweeyay xog urrintan kuna tilmaamay mid wax weyn ka tari doonta u diyaar garowga dhinaca amniga ee doorashada.
Waxa isna madasha ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha Somaliland isaga oo si weyn u soo dhaweeyay warbixintan, waxaanu intaa ku daray inay dhankooda ku dari doonaan wixii ay u arkaan inay qabyo tahayh.